3 परमेश्वरको अस्वीकार गर्न तरिका — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
3 परमेश्वरको अस्वीकार गर्न तरिका
तपाईं यूनिभर्स परमेश्वर अस्वीकार? यसलाई विश्वास गर या नगर, यो हामी सबै सोच्न एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो. यो अनन्त जीवन खुला परमेश्वरको भरोसा र विश्वास उहाँको राम्रो समाचार गर्नेहरूलाई दिनुभएको छ धर्मशास्त्र स्पष्ट छ, र बस न्याय उहाँलाई इन्कार गर्नेहरूलाई मा बाहिर छ. तर परमेश्वरले अस्वीकार गर्न एक भन्दा बढी तरिका छैन. यहाँ तीन म नयाँ नियममा पाइने कि.
1. येशूले तिनी कसले भन्यो छ कि इन्कार
“यो झूटो हुनुहुन्छ तर येशूलाई ख्रीष्ट हुनुहुन्छ इनकार गर्ने? त्यो एटिक्राईष्ट छ, उहाँले पिता र पुत्र जो इनकार. पुत्र इनकार गर्ने कुनै एक पिता छ. जसले पुत्र confesses पनि पिता छ।”
1 यूहन्ना 2:22-23
त्यहाँ आध्यात्मिक वा धार्मिक रूपमा आफूलाई विचार जो आज हाम्रो संसारमा धेरै मान्छे छन्. तिनीहरूले परमेश्वरको अवस्थित भनेर विश्वास, र तिनीहरूले आफ्नै तरिकामा उहाँको उपासना गर्न प्रयास. शायद उनि पनि एक महान् शिक्षक वा परमेश्वरको अगमवक्ताको रूपमा येशूले हेर्न. तर तिनीहरूले येशूको छ भन्ने विश्वास गर्छन् भने जसले उहाँ भने, तिनीहरूले उहाँलाई इन्कार गर्दै.
केवल एउटा ठूलो नैतिक शिक्षकको रूपमा येशूलाई देखेपछि अझै पनि उहाँलाई तिरस्कार छ र यसैले परमेश्वरको इन्कार. परमेश्वरले येशूलाई संसारको उद्धारकको रूपमा हाम्रो ध्यान निर्देशन र उहाँले हामीलाई कुनै पनि वैकल्पिक मार्ग प्रदान गर्दैन (यूहन्ना 14:6, प्रेरित 4:12).
त्यसैले तिरस्कार येशूले परमेश्वरको तिरस्कार छ. तर, यूहन्ना 1:12 भन्छन्, "सबै जो उहाँलाई ग्रहण गरे, जो आफ्नो नाम मा विश्वास, उहाँले परमेश्वरको सन्तान गर्ने अधिकार दिए।” जो कोहीले परमेश्वरको एक बच्चा हुन सक्छ, तिनीहरूले येशूको मा विश्वास थियो भने.
2. येशूले अरूलाई अघि Acknowledging छैन
“त्यसैले हरेकले मानिसहरूका सामु मलाई स्वीकार्छन्, म पनि आकाश छ मेरो बुबाको अघि स्वीकार गर्नेछ, तर जसले मानिसहरूका सामु मलाई इनकार, म पनि आकाश छ मेरो बुबाको अघि अस्वीकार गर्नु हुनेछ।”
त्यसैले शायद हामी येशू हाम्रो हृदयमा प्रभु हो भनी स्वीकार गर्छन्. तर हामी अझै पनि अरूलाई अघि उहाँलाई लज्जित भएर उहाँलाई अस्वीकार गर्न सक्छन्. अब, हामी सबै अरूलाई अघि हाम्रो विश्वास स्वीकार गर्न ढिलो भएको. हामी धर्म र विशेष मसीहीधर्म तिर झन् शत्रुतापूर्ण छ कि एक संस्कृति बस्न. मसीहीहरूले मूर्ख विश्वास morons रूपमा चित्रित छन्, हानिकारक, र कट्टर दन्तिये. यसले हामीलाई फिर्ता कम गर्न कहिले काँही सक्छ, र हामी सोच्न गर्नेहरूलाई हामीलाई नकली हुनेछ अघि येशूले स्वीकार गर्न इन्कार.
यो दुःखद छ. यो येशूले सानो हेर्न बनाउँछ र यसलाई उहाँ सबै कुरा एक इन्कार छ. तर चेतावनी दिएको छ, हामी मानिसहरूका सामु येशू अस्वीकार गर्ने निर्णय भने, उहाँले पनि पिता अघि हामीलाई अस्वीकार गर्नु हुनेछ. र हामी परमेश्वरको उपस्थिति खडा गर्दा येशू भन्नुहुन्छ नभएसम्म, "उहाँले मलाई साथ छ,” हामी प्राप्त गरिरहनु भएको छैन. ख्रीष्टको गर्न उचित प्रतिक्रिया छैन लाज वा डर छ, तर साहस र एक उत्सुकता उहाँलाई अरूलाई अघि साझेदारी गर्न.
“तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्न profess, तर तिनीहरूले आफ्नो काम गरेर उहाँलाई अस्वीकार।”
त्यसैले शायद तिमी राम्रो गरिरहनुभएको जस्तै यो बिन्दुमा तपाईं महसुस. ख्रीष्टले रूपमा येशूको स्वीकार, र तपाईं मसीही हुन् भनेर भन्न मा गर्व. तपाईं को लागि मेरो अर्को प्रश्न छ, "आफ्नो जीवन के भन्छ?” हामीलाई छत भन्दा माथि बाट गाली गर्न सम्भव छ "येशूले प्रभु र म उहाँको चेला हुँ!” अहिलेसम्म हाम्रो शब्दहरू बाहिर डुबेर मर्छन् छन् कि यस्तो गंदा जीवन छ.
तीतस मा 1, पावलले आफ्नो काम गरेर परमेश्वरको इन्कार बारेमा झूटा शिक्षकहरू बोल्छ. तर हामीलाई कुनै पनि भनेर हामी भन्न के contradicts तरिकामा जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ. येशूमा विश्वास सधैं हामी बाँच्न बाटो परिवर्तन हुनेछ. त्यसैले आफ्नो जीवन केही जस्तो देखिन्छ भने परिवर्तन भएको छ, केही कुरा सही होइन. हाम्रो कामुकतालाई यौन इच्छा लागि परमेश्वरको राम्रो योजना को एक इन्कार छ. हाम्रो गर्व सबै कुराको केन्द्रको रूपमा परमेश्वरको ठाउँ को एक इन्कार छ. हाम्रो अनाज्ञाकारिताले सबै सबै सृष्टिको वैध प्रभुको रूपमा परमेश्वरको भूमिकालाई इन्कार छ.
तपाईं शब्दहरू येशूले स्वीकार गर्न सक्छ, तर आफ्नो काम उहाँलाई अस्वीकार गर्छन्? अरूको मायालु छन् (यूहन्ना 15)? तपाईंले उहाँलाई पालन गर्दै (यूहन्ना 14:15)? तपाईं फल फलाउने छन् (गलाती 5:22-23)? तपाईं sacrificially तपाईंको स्रोतहरू अरूलाई आफैलाई र दिइरहेका छन् (2 कोरिन्थी 8:1-5)? के तपाईं उहाँको वचन परमेश्वरको खोजिरहेका छन्?
हामी धेरै यी बुँदाहरू हेर्न र एक वा ती सबै मा आफूलाई केही देख्ने. तपाईं लाज महसुस भने तरिका को तपाईंले उहाँलाई अस्वीकार गर्नुभयो किनभने, त्यहाँ राम्रो समाचार छ. परमेश्वरको पनि इन्कार येशूले क्रूसमा मा लागि भुक्तानी थियो, हामी पत्रुस संग यति स्पष्ट देख्न रूपमा. तपाईं इन्कार को पाप देखि बारी भने, र विश्वास गरेर येशूको प्राप्त, पाप क्षमा हुनेछ.
ख्रीष्टको Fam भरोसा राख्न.
विजेता • अगस्ट 19, 2013 मा 8:17 छु • जवाफ
म यो आवश्यक. विशेष गरी कपट “/
Dani • अगस्ट 19, 2013 मा 8:18 छु • जवाफ
अति उत्तम! धन्यवाद सर! :)
थोमस स्टीवर्ट • अगस्ट 19, 2013 मा 8:18 छु • जवाफ
सुन्दर पोस्ट! यो मेरो आफ्नै कार्यहरू मनन गर्न निश्चित सारियो. सानो digression…तीतस मा सन्दर्भित पद हुनुपर्छ 1:16, छैन 2:16. परमेश्वरले तपाईंलाई परमेश्वरको शक्तिशाली मानिस प्रयोग गर्न सक्छ!
विलियम • मार्च 27, 2018 मा 2:32 बजे • जवाफ
उत्कृष्ट भाइ परमेश्वरको, म प्रयोग राख्न!!!
अतिथि • अगस्ट 19, 2013 मा 8:19 छु • जवाफ
म साँच्चै विश्वास येशू परमेश्वरको छोरा हराएको छ जो हरेक एक उद्धार गर्न यो पृथ्वीमा पठाएको. तर भने भइरहेको, म अन्य वरिपरि प्रकारको एक लजालु व्यक्ति हुँ, र म सामाजिक अवसरहरूमा मा अप्ठ्यारो येशू र सुसमाचारको बारेमा कुराकानी समावेश छैन भनेर प्राप्त, म नतिजा डराएका छु अनुमान किनभने येशूको बारेमा कुरा समावेश गर्छन् कि कुराकानी एक्लै गरौं. म यो डर कसरी हटाउन सक्नुहुन्छ? मदत गर्नेछ केही पदहरू?
कलिलो • अगस्ट 19, 2013 मा 8:20 छु • जवाफ
को कुराकानी म धेरै सैन्य मा रहेको कि प्राप्त गर्छन किनभने बारी विरोधी मसीही वा धार्मिक देखिन्छ जब म साँच्चै तपाईं के मतलब यो ती पटक आउँदा बुझ्ने. वास्तवमा बस अन्य दिन happend… एक कप्तान परदेशी तिनीहरूलाई बारेमा पृथ्वीमा मानिसहरूलाई र आफ्नो विश्वास सिर्जना गर्ने बारेमा मलाई कुरा. यो इतिहास च्यानल धेरै मा आउँछ you'r यो दृश्य परिचित छैन भने (पुरातन परदेशी). यो दृश्य मलाई धेरै रोचक छ तापनि, म यसलाई आफैलाई विश्वास छैन. जे भए पनि, म ठीक जब के गर्छन यो हाम्रा प्रभु लागि बोल्ने आउँदा. कहिलेकाहीं म स्नायु छु, कहिलेकाहीं म छु, तर महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्ने हो. यो तपाईं के विश्वास प्रकट होस्. साहस कुरा हामी डराउँछन् पनि गरिरहेको छ. पूर्ण इमानदार हुन, अन्त मा यो मान्छे मलाई राम्रो मूर्ख हेर्न गरे. म धेरै डकगरिएको, म मेरो टाउको पछाडि मा म जानकारी धेरै भूल, र रित्तै भयो. म मूर्ख महसुस र म मूर्ख देख्यो निश्चित छु. तर, म मेरो सबैभन्दा गरे र त्यो बिल्कुल थाह मलाई यसको लागि ठूलो मामला बनाउन सक्षम रहेको भए तापनि के विश्वास. मलाई विश्वास छ यो एक मसीही हुनुको भाग हो; सतावट. म परेशान र rediculous महसुस, तर मौका परमेश्वरको बारेमा बोल्न फेरि आए भने म यो राज्यहरू खातिर सबै फेरि माथि के थियो, तर म तयार अर्को समय हुनेछु पक्कै lol… आषा. यो सबै परमेश्वरको लागि जीवित बारेमा, र ख्रीष्टमा हामी परमेश्वरको लागि जीवित हामी खेदो कि गरिनेछ र harrased हेर्न. महत्वपूर्ण कुरा परमेश्वरको लागि खडा छ. म परमेश्वर confrontational अवस्थामा परमेश्वरको लागि बोल्न एक डराएको सानो केटा attemt हेर्न प्रेम कल्पना, त्यसपछि हेर्न एक प्रमुख theologan आफ्नो बाटो मा हरेक एक बन्द. म त्यो क्रूसमा थियो जब येशूले अरूलाई जस्तो के आश्चर्य. म मूर्ख सही फिट थियो लाग्छ, किनभने परमेश्वरको हुन दावी, अझै अरूको उहाँले क्रूसमा बन्द आफूलाई मदत पनि couldnt देखे. म Captian मेरो कुराकानीमा अरूलाई मूर्ख देख्यो थियो जस्तै उहाँले अरूलाई मूर्ख देख्यो, तर म पिताको क्रूसमा येशूको लाग्यो के आश्चर्य… गर्व म मान्छु.
“शरीर मार्न गर्नेहरूको affraid नगर्नुहोस् तर प्राण मार्न सक्दैन. नरक मा प्राण र शरीर दुवै नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ जसले एक को बरु affraid हुन।”
Aleisha • डिसेम्बर 2, 2014 मा 8:52 बजे • जवाफ
नमस्ते यो टिप्पणी साँच्चै यहाँ को डिसेम्बर मा मलाई ministered 2014. म बस परमेश्वरले मलाई क्षमा र मलाई उहाँलाई अस्वीकार गर्न मदत गर्न र सोधे म कहिल्यै उहाँले म लामो मेरो बुबा गर्व छ रूपमा हेर्न कसरी मूर्ख मतलब छैन LLord छ साबित गर्न छ भने, म तपाईंलाई येशूले प्रेम.
TonyStartk • मार्च 5, 2018 मा 8:46 छु • जवाफ
थोर पालन, गर्जन परमेश्वर.
Mireyjesu • अगस्ट 19, 2013 मा 8:20 छु • जवाफ
1 कोरिन्थी 1:17, एफिसी 6:18-20
अतिथि • अगस्ट 19, 2013 मा 8:21 छु • जवाफ
धन्यवाद, ती दुई महान पद हो! म तपाईंको सहयोगको सराहना
JacobP • नोभेम्बर 24, 2014 मा 9:37 बजे • जवाफ
तपाईं यो पोस्ट को लागि धेरै धेरै धन्यवाद! यो धेरै उत्साहजनक र उत्थान थियो. म पनि टिप्पणी देखि अन्तरदृष्टि आनन्द! परमेश्वरले तपाईंलाई सबै आशीर्वाद! प्रशंसा ख्रीष्टको प्रभुहरूका राजा प्रभु राजा! <3 इमानदार म आवंटित संघर्ष गरिएको छ. A lot of times I feel like I'm too bad I won't get any better and I don't really believe with all my heart all my soul and all my mind. I get upset cause I don't put him firstalot. If I did I wouldn't give in to lust. म यद्यपि उहाँलाई प्रेम थाहा. म आभारी छु! मलाई थाहा उहाँले मलाई प्रेम गर्दछ! मलाई थाहा उहाँले पनि मेरो पाप क्षमा. I don't understand why. I'm very shy and fearful. It's very hard to talk and show that I'm proud of believing in God I already feel like I'm gonna be ridiculed or they won't care to hear or talk about God. कहिलेकाहीं म लज्जित प्राप्त किनभने लाग्छ. I'm not ashamed of Christ. I'm ashamed that I don't have all the answers and I can't explain all the details that I don't know enough. And I'm ashamed I'm not going to represent Christ well. त्यसैले म डराएको प्राप्त र शान्त प्राप्त. I'm sorry I'm making suchalong comment. But I guess I'm just saying I needed the encouragement! That I'm not alone! ख्रीष्टको क्षमा! I honestly think I amabad Christian and sometimes doubt I'm saved. म लागूपदार्थ प्रयोग हाल कारण गरिएका र ALOT lusting गरिएको र म पतित जस्तो म महसुस एक धेरै. Like because I'm using drugs again and lusting even tho I want to stop truly, does that mean I'm not saved anymore?
रीता • डिसेम्बर 11, 2014 मा 5:17 बजे • जवाफ
म यसलाई र अर्थ बिना येशूले अस्वीकार गरेको हुन सक्छ किनभने whats लिखित पढ्न जब म मेरो आँसु रोक्न couldnt IAM साँच्चै खेद cuz म येशूको प्रेम र म येशू र परमेश्वरको मा truely विश्वास र म फेरि कहिल्यै अस्वीकार वा जसरी मा लज्जित हुनेछ. म येशूको लज्जित भएको कहिल्यै मान्छे को आफ्नो भर्खरै धेरै जब म परमेश्वरको मेरो belive कुरा र मलाई IAM dům वा केही र मलाई येशू मेरो belive बारेमा कुरा गर्न चाहने बनाउन महसुस बनाउन मलाई मूर्ख हेर्न बनाउन. Thats गलत म कहिल्यै गर्नेछन् फेरि म forgivness लागि परमेश्वर र येशू प्रार्थना गरे र अब देखि म परिवर्तन हुनेछन् र म जसरी पनि उहाँलाई अस्वीकार अभ्यस्त. म के तपाईं येशू र परमेश्वरको IAM मसीही र IAM त गर्व लागि धन्यवाद प्रेम. तपाईं दुवै मेरो हृदय छोयो लेखे के तपाईं Flaco र jacobp धन्यवाद. रीता
Latoyah अस्टिन • जनवरी 28, 2015 मा 10:23 बजे • जवाफ
@JacobP: जो कोहि अरू तपाईंको अन्त्य प्रश्न त्यहाँ वा जवाफ यदि म निश्चित छु. तर, म प्रतिक्रिया नेतृत्व महसुस: लागूपदार्थ गरिरहेको, lusting, गर्व, आदि हाम्रो पापी स्वभाव देखि आउने बानी हो. तिनीहरूले पाप र पाप हो, बस राख्न, परमेश्वरले हामीलाई अलग कुनै कुरा छ. जब येशू क्रूसमा मृत्यु, उहाँले हाम्रो प्राण सुरक्षित. यूहन्ना 3:16 मेरो आत्मा आउँछ. त्यसैले, तपाईं याकूबको सुरक्षित छन्. तर, काम / अब हामी पवित्र आत्मा आमन्त्रण गर्नुपर्छ c पुन: जन्म हामीलाई ख गरेको छैन –येशूले निकोदेमसलाई भन्नुभयो रूपमा, हामी फेरि जन्म हुनुपर्छ. रोमी 12:2 हामीलाई यो संसारमा conformed होइन भन्छ गर्न, तर हाम्रो मन को Renewing द्वारा कायापलट गर्न. र गलाती 5:16 हामी आत्मामा पालन यदि भन्छन्, हामी शरीरको कामवासना पूरा हुँदैन. त्यसैले, याकूबले, हामी सुरक्षित छन्; तथापि, हामी अब परमेश्वर हाम्रो पुरानो पापी बानी परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ पर्छ, इच्छा, र उहाँको आत्मा मार्फत mindsets– उहाँको वचनद्वारा. हामी पवित्र छन्, शुद्ध, र ख्रीष्टले धोए (जीवित शब्द)- एफिसी गर्न सन्दर्भ 5:25-26. कथा को नैतिक JacobP छ: हो, तपाईं सुरक्षित छन्. र येशूले गहिरो प्रेम गर्नुहुन्छ. तर, आफ्नो जीवनमा पाप / हाम्रो जीवन ती क्षेत्रमा उहाँलाई हामीलाई अलग. हामी उहाँको वचन हाम्रो मन दैनिक नविकरण गर्न र उहाँको छवि हामीलाई परिवर्तन गर्न अनुमति हुनुपर्छ. हामी ख्रीष्टको अनुयायी हुन चाहनुहुन्छ, बस छैन शब्द र काम मार्फत–हाम्रो हृदय देखि. परमेश्वरको स्पष्ट तपाईं धार्मिकताको भोक र तिर्खा देख्न सक्नुहुन्छ –हामी साँच्चै उहाँलाई चाहनुहुन्छ? …म साँच्चै आशा यो मेरा भाइहरू वा बहिनीहरूको एक मद्दत गर्छ.
Femi • फेब्रुअरी 22, 2015 मा 7:32 छु • जवाफ
यो भयानक छ! यो आशिष्
केरी • जुन 1, 2015 मा 9:59 छु • जवाफ
ख्रीष्टमा मेरो प्रिय मित्र,
म कुरा तपाईं को लागि राम्रो जाँदैछन् प्रार्थना. यो धेरै जीवनको कठिनाइ र हटाउन दैनिक संघर्ष व्यक्त हेर्न मलाई आनन्द दिन्छ. म पनि पद संग अरूलाई प्रोत्साहन हेर्न खुशी छु र जो सङ्घर्ष ती सहायता प्रेम. हामी सबै शेयर म धेरै अंक लाग्यो गर्नुभएको एक समूह हुँदा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ शायद असुरक्षा मद्दत गर्न. यसलाई यसरी हेर्न: हामी सबै हामीलाई सबै भित्र विश्वास प्रणाली छ. साँच्चै हो के व्यक्त गर्न “तिमीमा” साहस लिन्छ तर यो मान्छे आउँदा लागि निन्दा “के हामीलाई अद्वितीय बनाउँछ”, छैन साँच्चै आफ्नो समस्या छ. आफ्नो बोली परमेश्वर मलाई offends भन्न नडराऊ. यसलाई सरल राख्न. हामी सबै पावलले जस्तै हुन सक्दैन, तर हामी एन्ड्रयू जस्तै हुन सक्छ. म प्रेमको स्रोत फेला गर्नुभएको, येशूले. मलाई शान्ति के बनाउँछ छ भेटिएन गर्नुभएको: येशूले! शायद अरूलाई शान्ति तपाईं हेर्न र भाग गर्दा “गफ” पनि एक व्यक्ति परिवर्तन हुनेछ. हामी साँच्चै खोज्न प्रशंसा येशूले छ कि 'सम्झना, छैन Mans> लडाई जारी राख्नुहोस्, सजिलो हुन्छ कहिल्यै. दिन्छ हामी सबै सँगै हिंड्न , असल लडाइँ लडिरहेका. परमेश्वरको गौरव हुन!
जोश • सेप्टेम्बर 12, 2015 मा 8:13 बजे • जवाफ
म त्यो सच्याउन प्रयास छु त कपटी छु रूपमा यो वास्तवमा मलाई मदत विशेष गरी कपट. धन्यवाद यो लागि धेरै
katie • सेप्टेम्बर 18, 2015 मा 5:03 छु • जवाफ
तपाईं के लेखे @latoyah अस्टिन धेरै साँचो हो! परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्छ र हामी सुरक्षित छन्. @jacobp तर हामी पहिलो ख्रीष्ट हाम्रो पापको हाम्रो मुखले स्वीकार गर्नुपर्छ (यो पश्चात्ताप मार्फत गरिन्छ) र त्यसपछि हाम्रो दुष्ट तरिका बाट बारी (इजकिएल 14:6). परिवर्तन रात हुँदैन र पश्चात्ताप निरन्तर दैनिक छ / ,तर हामी हाम्रो मन खोल्न र आफूलाई परमेश्वरको उपलब्ध गर्दा हामीलाई परिवर्तन गर्न उहाँले हुनेछ. म प्रभु तपाईं यो पैदल छन् दायाँ जहाँ तपाईं पूरा गर्नेछ भन्ने प्रार्थना र पाप घृणा गर्न ख्रीष्ट गर्छ रूपमा सुरु हुनेछ भनेर. म ख्रीष्टको रक्षा को परीक्षण फेरि वरिपरि आउँछ जब तपाईं निडर भई बोल्न उहाँको आत्माले शक्ति हुनेछ भनेर भन्दा साहस घोषणा! र तपाईं वरिपरि अरूलाई ख्रीष्टको चिन्न मदत (के तपाईं थिए जहाँ छन् गर्नेहरूलाई सम्बन्धित सक्नुहुन्छ). भगवान एक रणनीतिक परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले गल्ती छैन, जहाँ कुराहरू गलत जाने हामी विचार गर्दा हामी परमेश्वर हुनुहुन्छ र हाम्रो आफ्नै निर्णय / जीवनमा छनौट गर्न प्रयास छ. म यो हेर्न आशा र अहिले राम्रो ठाउँमा छन्. पनि बाइबल पढ्न, परमेश्वरले हामीलाई नयाँ नियमको बाँच्न कसरी निर्देशन दिनुभयो (पछि सबै कुरा मत्ती) सुरु गर्न ठूलो ठाउँ छ; यो डुब्नु गरौं र अर्को कुरा गर्ने सार्दा अघि समझ प्राप्त.
JaniceMNewton • डिसेम्बर 7, 2015 मा 10:32 छु • जवाफ
मलाई क्षमा येशूले सोध्नु छ , म अज्ञानता मध्ये एउटा भन्दा बढी तरिकामा उहाँलाई अस्वीकार गरेको छ, बारेमा म कसरी राम्रो छु यो जब क्षमा अयोग्य महसुस, तर येशूले बगाएको कि रगत पर्याप्त भन्दा बढी थियो.
जस्टिन Mkandawire • जनवरी 23, 2016 मा 5:11 छु • जवाफ
Timmie • सक्छ 15, 2016 मा 10:26 बजे • जवाफ
यस को लागि धन्यवाद. म सधैं भगवान अस्वीकार गर्न नयाँ तरिका खोज्दैछु र यो लेख नयाँ blasphemous विकल्पहरू मलाई प्रदान ठूलो मद्दत थियो. पुरै “परमेश्वर कांस्य उमेर समाज ब्रह्माण्डको वास्तवमा कसरी काम गर्छ रूपमा कुनै संकेत थियो कि को जन्म बस अर्को हास्यास्पद मिथक छ।” बोली एक समय पछि पुरानो हुन्छ. एक समय को लागि म संग यो मिश्रित “त्यहाँ असाधारण काम रोमी साम्राज्यको राखन रेकर्ड मा गरे तापनि येशू ख्रीष्टको ऐतिहासिक अस्तित्व लागि बाइबलीय पदहरू बाहिर कुनै प्रमाण छ।” र “कुनै एक तिनीहरूले जनगणना लागि जन्मनुभएको शहर फर्केर जान र आफ्नो कर तिर्न छ. रोमीहरूलाई मान्छे अब जीवित थिए जहाँ थाहा चाहन्थे र त्यहाँ कर राजस्व चाहन्थे होला. बेतलेहेममा गर्न यात्रा तथ्यलाई पछि विकास एक साहित्यिक उपकरण हो भनेर येशूले’ जन्म साइट अघिल्लो भविष्यवाणी संग लहरै. साथै, रोमीहरूलाई कुनै पनि जनगणना वा कराधान को कुनै रेकर्ड छ।” भाषण तर पनि ती जो आफूलाई लागि सोच्न पाऱ्यो गर्न सकिँदैन दस सेकेन्ड लागि मानिसहरूलाई दोहरो धेरै दर्जन पटक पछि थकित प्राप्त. त्यसैले एक पटक फेरि, तपाईं अदृश्य आकाश बाबाले अस्तित्व अस्वीकार गर्न नयाँ र आविष्कारशील तरिकामा मलाई प्रदान लागि धन्यवाद. म पूर्ण यसलाई कदर!
जेम्स Ushie पहिले • जुन 18, 2016 मा 5:06 छु • जवाफ
मलाई यो मन पर्यो; पापी हामी हाम्रो तरिकाहरू Amead गर्न.
Lamr ः ayes • अगस्ट 14, 2016 मा 5:30 छु • जवाफ
Timmie : “बेतलेहेममा गर्न यात्रा तथ्यलाई पछि विकास एक साहित्यिक उपकरण हो” … साँच्चै ? के तपाईं साँच्चै यो विश्वास ? केवल एक प्रश्न,4शब्द … “के तपाईं गलत हुनुहुन्छ भने”.
एमिली हे • सेप्टेम्बर 15, 2016 मा 12:25 बजे • जवाफ
के भने, एउटा मसीही आफ्नो सम्पूर्ण जीवन भएको छ जसले कसैले, बप्तिस्मा गरिएको, देखेको चमत्कार हुन, र यति धेरै त भन्दै द्वारा कसैले गर्न झूट बताउन “म मसीही हुँ भन्न छैन तर म एक उच्च शक्ति विश्वास”.. परमेश्वरले तिनीहरूलाई क्षमा हुनेछ?? तिनीहरूले साँच्चै यो र पश्चात्ताप बारेमा भयानक महसुस यदि?
शन • सेप्टेम्बर 24, 2016 मा 10:15 बजे • जवाफ
हो, उसले हुनेछ. परमेश्वर हाम्रो कमजोरी बुझ्नुहुन्छ. त्यो व्यक्ति बस सुसमाचारको को unashamed बन्न आवश्यक छ. भगवान स्थिर वृद्धि लागि देखिन्छ, तत्काल छैन पूर्णता.
Brucid • अक्टोबर 14, 2016 मा 5:19 छु • जवाफ
पुस्तकमा पढ्न2कोरि 5:17-19
भगवान मानिसहरूको पापको गणना छैन.
पढ्न 1 जन 1:9 पनि.
उल्लेख:6को 3.14 – आखिरी शौचालय कागज रोल
डेनिस • नोभेम्बर 10, 2016 मा 1:17 छु • जवाफ
म मेरो काम गरेर Jeseu अस्वीकार ve लाग्छ (कपट) तर क्रूसमा रहनसहन लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद.
लैरी जनसन • जनवरी 15, 2017 मा 1:18 बजे • जवाफ
सत्य को लागि खोज. धन्यवाद
दानियल • फेब्रुअरी 15, 2017 मा 1:15 छु • जवाफ
दानियल • मार्च 24, 2017 मा 8:20 बजे • जवाफ
Marsha • अप्रिल 8, 2017 मा 4:14 बजे • जवाफ
म मसीही थियो र मेरो मन म परमेश्वरको गलत सोच्न थाले जहाँ लियो र उहाँले मलाई उहाँ र उहाँले लाग्यो छौँ छौँ गर्न पठाउने थियो त बन्द छैन मलाई लाग्यो यो म त्यहाँ गएर र धम्की स्वीकार दर्शाउन उहाँबाट थियो लाग्यो भगवान भगवान र बायाँ विश्वास विरुद्ध व्यापार र आत्म र त्यसपछि कठोर हृदय नष्ट. परिवार र येशूको मलाई परमेश्वरको Thenot परमेश्वरको सेवक अलग अहिले र सदाको thru भने. म तिनीहरूलाई फिर्ता जीवनको प्रभुको रूपमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ तर तिनीहरूले मलाई फिर्ता लिन तयार छैनन्. सहायता कृपया
Rickylee • अप्रिल 20, 2017 मा 7:28 छु • जवाफ
म येशू ख्रीष्टको; म बाइबल विश्वास गर्ने छु, म उहाँले प्रभुहरूका राजा र प्रभु को राजा छ स्वीकार!
OdioEmmanuel • सक्छ 7, 2017 मा 3:33 छु • जवाफ
आफ्नो नाम कहिल्यै लागि महिमा हुन सक्छ
JaketaFenner • सक्छ 13, 2017 मा 10:55 छु • जवाफ
नमस्ते महिलाहरु! येशूले प्रभुको छ! येशूले वरिपरि मेरो जीवन गरिएका छ, म अब एक masturbater छु, कटर(आफ्नै हानी), हावी, hater, र सबै म को मनपरेको. केही मानिसहरू म भने के भन्न लागि यो एक धेरै लिन्छ, खुसीको, परमेश्वरले मलाई यी पापको क्षमा छ किनभने मेरो लागि यो भएन र म कुनै बताउन किनभने यो सबै को लागि मलाई यो भन्न मा केहि लिएनन् लज्जित छैन र म मेरो रहस्य एक अवरोधलाई हुन चाहँदैनन् कसैले. मानिसहरूले यसलाई के लाग्छ कुनै कुरा प्रभु जारी गर्न र कुनै पनि पाप छुटकारा उसलाई सोध्न लागि र तपाईं प्रभुको इच्छा हुनेछ कि म चाहन्छु! धन्यवाद, आफ्नो कृपा र अनुग्रह परमेश्वरको! यो विषय (3 परमेश्वरको अस्वीकार गर्न तरिकामा) धेरै उपयोगी म Google मा खोजी किनभने थियो “कसरी म येशूलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ” म मान्छे येशूले सबै भन्दा प्रभु हो जान्न चाहन्छु किनभने म प्रभु लागि थप र थप गर्न चाहनुहुन्छ र यो सबै भन्दा राम्रो छ. म प्रभुको लज्जित छैन जबसम्म धूलो म फर्किन म बाँकी वा मेरो जीवनको लागि उहाँको सेवा हुनेछ. ठूलो दिन छ र म आशा यो पोस्ट बाहिर त्यहाँ कसैले मद्दत गर्छ! त्यहाँ येशूको नाम मा शक्ति छ, तपाईं प्रभु धन्यवाद!
लोरी • जुन 18, 2017 मा 7:14 बजे • जवाफ
कसरी मैले परमेश्वरको इन्कार लागि क्षमा प्राप्त गर्छन्?
Gaby • अक्टोबर 11, 2017 मा 7:53 बजे • जवाफ
स्वीकार गर्न जाने
NormanBerry • अक्टोबर 15, 2017 मा 10:21 छु • जवाफ
याकूबले प्रतिक्रिया. म बस भन्न चाहन्छु र म यो क्षण मा लेखिएको पद मलाई उपलब्ध छैन. तर यो तपाईं पवित्र आत्मा र यो संसारको कुराहरू बीच भताभुङ्ग छन् भने देखिन्छ. म मा छैन टिप्ने छु यो देवता सबै अनुभव सृष्टिको नश्वर जगतले छ बस के छ. त्यहाँ एक मानिस उहाँले गर्नुपर्छ के येशूले सोध्नु पद को एक खण्ड सुरक्षित छ र येशूले उसलाई भन्नुभयो “आफैलाई अस्वीकार, तपाईंको पार लाग्न , र मलाई पालना गर्नुहोस्।” भाइ, कि भारी छ! म थाह मार्क येशूको पुस्तकमा कतै पनि भन्नुभयो “तपाईंले आफ्नो पार लाग्न छैन अप यदि र तपाईंले मलाई योग्य छैनन् भनेर मलाई पछ्याउन”. म गरिरहेको जस्तै महसुस गर्छन्? मेरो नश्वर प्रकृति म छैन. म धर्मशास्त्रको सिकें र परमेश्वरको प्रेम र उहाँले हामीलाई सिर्जना र त्यसपछि हामीलाई उहाँलाई र आफ्नो बाटो वा छानेर को विकल्प को एक स्वतन्त्रता अनुमति र त एक नश्वर बस्नुहुन्थ्यो आफ्नो पुत्रलाई बनेको बलिदान बारेमा स्पष्ट चित्र छ भएकोले atone लागि हाम्रो साथ जीवन ती पटक हामी परमेश्वरको पालना गर्दा छैन किनभने मात्र उसलाई मृत्यु यातना गरेका, त्यसपछि म यो मलाई उहाँले आज्ञा के पछ्याउन लागि यो लायक छ विश्वास. म मेरो दैनिक यसलाई येशूको देखि निर्देशन लिएको र लागू गरेका छन् देखि म अब यो संसार र जीवनको शिकार महसुस. म जीवित उद्देश्य छ र म यो जीवन को एक महत्वपूर्ण भाग हुँ भनी हुनत यो सानो लाग्न सक्छ महसुस. परमेश्वरले मलाई सिक्ने संग आशिष् दिनुभएको छ र म विज्ञान एक ईश्वरीय सृष्टिकर्ता प्रमाणित गर्छ कि बुद्धिजीवियों यसो भन्न चाहन्छु. हामी यस सृष्टिकर्ता एक नश्वर शरीर को सीमितता सीमित छैन न त परमेश्वरको सृष्टि आफैले छ. गरेको आइंस्टीन मा एक हेरौं. दुःखको कुरा उहाँले एक ईश्वरीय भइरहेको अवस्थित सबै सिर्जना सक्ने गर्भ धारण गर्न सकेन, अझै Einsteins निष्कर्ष सबै कुरा ऊर्जा देखि बनेको छ कि साबित. ऊर्जा एक पदार्थ छैन तर यो एक शक्ति छ. त्यसैले त कसरी एक शक्ति विशिष्ट पदार्थ मा गठन हुन सकिँदैन र ती पदार्थ केही जीवित सिर्जना बन्न. त्यहाँ ब्रह्माण्डको परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो र हामी एक्लै ग्रस्त र व्यर्थमा महिमा मा मर्न बाँकी छैन. परमेश्वरले हामीलाई उच्च आशा छ. यो जीवन एउटा परीक्षण हो र हामी उहाँले हामीलाई दिनुभएको निर्देशनहरू परीक्षण पास गर्नुपर्छ.
जूलिया • नोभेम्बर 1, 2017 मा 1:33 बजे • जवाफ
आहा यो त सुन्दर म साँच्चै म प्रेम छ कि यो भगवान को यो शब्द को लागि धेरै धन्यवाद धन्यवाद रुचि छ
मैथ्यू • नोभेम्बर 14, 2017 मा 8:20 छु • जवाफ
यो पोस्ट लागि भाइबहिनीहरू धन्यवाद. म खेदो छु जब / दुरुपयोग(यो onwards बाल्यकाल भइरहेको सुरु) म नाम येशू घृणा सुरु. त्यसैले पनि पछि फेरि जन्म , म त पोस्ट मा उल्लेख गरिएको तीन मध्ये एक माध्यम उहाँलाई इन्कार छु. पनि स्वीकार पछि, म उहाँलाई पछ्याउन चाहन्छु र उहाँलाई प्रेम हुनत मेरो हृदय त्यहाँ नाम येशू तिर घृणा छ. म संघर्ष गर्दै छु. म उहाँलाई इन्कार देखि बाहिर आउन नाम येशू वा कसरी स्वीकार गर्न कसरी खोज्ने सुरु किन हो. म वेबसाइटमा यो ब्लग देखे. साझा लागि धन्यवाद. तपाईं येशू ख्रीष्टको मेरो पहिलो प्रेम पुनर्स्थापना मलाई प्रार्थना र पनि शरीर मार्फत उहाँको प्रेममा पालन गर्न सक्नुहुन्छ, आत्मा, प्राण र म मेरो मृत्यु वा उहाँको दोस्रो आगमनमा सम्म उहाँलाई अस्वीकार गर्नु हुनेछ भनेर छैन भावना ?
Mack • फेब्रुअरी 3, 2018 मा 8:20 बजे • जवाफ
हामी बनाउन जो speechs भन्दा छिमेकीलाई गर्न मायालु भने म परमेश्वरको धेरै रुचि छ कि लाग्छ. मेरो रूपान्तरण मा सहायक महिला अत्यन्तै मायालु थियो र त्यो सधैं परमेश्वरको क्रेडिट दिन हुनेछ, तर त्यो सधैं यो सिर्फ त्यो नियमित मा ड्र कुरा रूपमा छलफल हुनेछ. तर, ठूलो influencer त्यो थियो कसरी मायालु थियो. एक अज्ञेयवाद रूपमा मेरो पूर्व जीवनमा, मानिसहरूको शब्दहरू मलाई अनिवार्य कुनै प्रभाव थियो. यो आफ्नो कार्यहरू थियो. कसरी मायालु तिनीहरू, कसरी दयालु, कसरी स्वीकार. म एक साँच्चै छोटो श्रृंखला मा एक क्रस लगाउने. (हास्यास्पद कथा. मेरो क्रस लुकेको हुनेछ भनेर म मेल मा लामो श्रृंखला आदेश म "अपमान" थियो भनेर. मेल आइपुगे क्रुसको "गल्ती" म अघि के थियो चाहन्छु भन्दा छोटो थियो! सन्देश प्रभु पायो!) त्यसैले म छोटो श्रृंखला र सबैलाई मेरो क्रस सबै समय हेर्न सक्नुहुन्छ कि लगाउने. तर अब ठूलो प्रश्न छ, म मायालु छु. म परमेश्वरको प्रिय सन्तान रूपमा सबैलाई व्यवहार गर्छन्? हामी भोक उपेक्षा गरेर येशूको अस्वीकार, को कैदी, को बेघर. येशूले कप को भित्र सफा भन्नुभयो र बाँकी नै भने हेरविचार गर्नेछन्. उहाँले लामो प्रार्थना बनाउने मान्छे तपाईं भन्दा Holier जस्तो गर्न चाहनुहुन्छ थिएन. हामी हाम्रो हृदयमा ख्रीष्टको प्रेम र मायालु कामहरू प्रदर्शन भने, हामी येशूको घोषणा गर्दै
Mack • फेब्रुअरी 3, 2018 मा 10:15 बजे • जवाफ
Jacobs सन्दर्भमा र हामी अझै पनि क्षमा? बाइबल क्षमा को कथा को पूर्ण छ. दाऊदलाई हेर्न पाप गर्ने र पाप र पाप. पत्रुसले येशूलाई अस्वीकार गर्ने हेर3समय र मण्डली को टाउको थियो. अब तपाईं परमेश्वरको सन्तान छन्. एउटा असल अविभावक तिनीहरूले बदमास हो किनभने, केवल आफ्नो बच्चा त्याग्न गर्छ? पक्का होइन. यो तपाईंको बच्चा छ. कति थप स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो पिताले. यो येशूले अहङ्कारको रूपमा धेरै गर्न विरोध थियो misdeeds थिएन. फरिसी प्रार्थना विचार, प्रभु यो पापी कर कलेक्टर जस्तै मलाई बनाउन छैन नीच लागि धन्यवाद. उहाँले सुरक्षित भएन. तर आफ्नो स्तन पिटे गर्ने नम्र कर कलेक्टर, येशूले सजिलै क्षमा. मेरो आफ्नै प्रार्थना जीवनमा, म परमेश्वरले हामीलाई overwhelmingly प्रेम अनुभव. उसले हामी गलत भन्दा सही बरु के मा ध्यान केन्द्रित गर्न tends. उसले धेरै नम्र छ (हामी छक्क हुँदैन. उहाँले एक Manger जन्म हुन रोजे र गरिबी को एक जीवन बिताउन). यसलाई हामी प्रार्थना समय खर्च गर्न र आफ्नो इच्छा खोज्न छनौट गर्दा उसले कृतज्ञ छ लगभग जस्तै छ. उहाँले हामी उहाँको खोजी गर्न गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ कि पूर्णतया थाह छ. त्यसैले हामी ईमानदारी उहाँको खोजी गर्छन् जब उहाँले कृतज्ञ छ र हाम्रो प्रयासको मोल. धेरै पटक हामी कुनै एक हामीलाई धेरै माया गर्न सकिएन लाग्छ टाढा किनभने परमेश्वरले धक्का गर्ने हुन्छन्. हामीलाई धेरै क्षमा. तर उहाँले गूंथाना परमेश्वरको लागि जस्तालाई छ. तिनीहरू सबै दिन काम वा अन्तिम घण्टामा कि सबै कामदारहरूलाई नै भुक्तानी प्राप्त. उहाँले सधैं उहाँको प्रेम तपाईंलाई lavish गर्न तयार छ, यदि तपाईं केवल उहाँलाई दिनेछौँ.
mynee • फेब्रुअरी 22, 2018 मा 10:54 बजे • जवाफ
सबै कुराको लागि यू धन्यवाद
कार्ला चार्ल्स • मार्च 6, 2018 मा 2:48 बजे • जवाफ
म पाप भनेर थाह पाउँदा खराब आचरणमा छ. प्रेरितहरूले हामीलाई आशा दिन्छ, ख्रीष्टमार्फत. म सधैं pecuilar मा प्रसन्न.
Nixar • सक्छ 4, 2018 मा 1:09 बजे • जवाफ
म हाम्रो अभ्यास अघि हाम्रो devotions लागि सल्लाह रूपमा उपासना टोली मेरो सँगी सदस्यहरूलाई यो साझेदारी गर्न योजना.
तर म यी सामान बारेमा दोषी महसुस. म अर्थ त्यहाँ अझै पनि म को पश्चात्ताप गर्न आवश्यक कुरा हो– र मेरो इन्कार उहाँलाई कहिलेकाहीं unnoticeably पीएफ छ.
बुबा कृपया यो पापको मलाई माफ र धार्मिकताको आफ्नो बाटो मलाई नेतृत्व. आमिन.
जो • सक्छ 24, 2018 मा 7:51 बजे • जवाफ
के म सधैं कसैले सबै छ मसीहीहरूले फूल हो प्रचार सुरु गर्दा भन्न & हामी सबै यो महसुस हुनेछ एक दिन केवल सपना छ छ…
राम्रो आफ्नो त सही यदि ( जो म तपाईं विश्वास छैन) हामीलाई मसीहीहरूले बस्ने गरेका छन् & हामी विश्वास के प्रेम .
अर्कोतर्फ यदि हामी ख्रीष्टियनहरू विश्वास के साँचो हो
(जो म साँच्चै परमेश्वरको हो भन्ने विश्वास & आफ्नो छोरा येशू वास्तविक छ)
दिन आउँदा हामी सबै देख्नेछन्. विश्वास गर्न भनेर तपाईं हुनेछ दिन, तर यो तपाईं को लागि ढिलो हुनेछ. म मेरो मामला बाँकी.
त्यसैले यसलाई विचार.
Catherinemeadows • जुन 13, 2018 मा 9:41 बजे • जवाफ
म त तिनीहरूले अभ्यस्त मलाई वा मेरो शब्दहरू aruge बाहिर आउनेछन् जाँदै डराएका म अस्वीकार कि म मृत्यु र IM जो कोहीले र IM कुरा गर्न लाज लागि मेरो Moma लागि उहाँलाई blaming थियो भगवान कारण लज्जित महसुस तर म माया गर्छु मेरो भाइ येशूले chirst र मेरो स्वर्गमा हुनुहुने पिता र म भगवान हाम्रो पापको लागि क्रूसमा मर्नुभयो आफ्नो छोरालाई पठाउनुभयो विश्वास गर्छन् र म IM सुरक्षित र म बप्तिस्मा उहाँलाई विश्वास गर्छन् र म आफ्नो शब्द विश्वास तर म पहिलो उसलाई म मेरो scaredness को प्राप्त गर्न मद्दत आवश्यक र affarid र लजाउने yall मलाई सहयोग र लागि धेरै धेरै धन्यवाद म यसलाई पिता आवश्यक म कहिल्यै मेरो कार्यहरू बाहिर अघि अस्वीकार यदि खेद बुबा pls आमिन क्षमा मलाई तपाईं र येशू नाम प्रेम im गर्न सक्नुहुन्छ
रबर्ट • नोभेम्बर 17, 2018 मा 6:25 बजे • जवाफ
यो Catherinemeadows मद्दत गर्छ आशा
म आज्ञा छैन? बलियो र साहसी होऊ; नडराउनुहोस्, न त dismayed हुन, प्रभु लागि आफ्नो परमेश्वरको तपाईं जहाँ जानुहुन्छ तपाईं संग छ। " (बाइबल हेर्नुहोस्, यहोशू 1:9)
आज, प्रभु तपाईं भन्नुहुन्छ, "राम्रो साहस को हुन!"
"अनि उहाँले भन्नुभयो, "हे निकै प्रिय मानिस, डर छैन! शान्ति तपाईं हुन; साहसिलो होऊ, हो, साहसिलो होऊ!"त्यसैले उहाँले मलाई कुरा गर्दा म बलियो भयो, र भन्नुभयो, "मेरो प्रभु बोल्न दिनुहोस्, लागि मलाई बलियो छ। "" (बाइबल हेर्नुहोस्, दानियल 10:19)
आफ्नो हृदय परेशान छ? साहस लिन…आफ्नो परमेश्वरको यहाँ छ!
हामीलाई शान्ति दिनुहुने एक पूर्ण हामीलाई यो दिन्छ.
परमेश्वरले तय आफ्नो आँखा जो राख्न र उहाँको व्यवसायको बारेमा जाने ती उहाँले तिनीहरूको हेरविचार गर्नेछन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ.
उहाँले त्यो कल ती योग्य जो कसैको.
उहाँले न्याय renders गर्ने कसैको.
जसले प्रदान कसैको.
साहसी को हुन तपाईंले बताउँछ जसले एउटा तपाईं निरुत्साहित छ के भन्दा बलियो छ.
बाइबल फेरि भन्छन्, "तर अब, यसरी प्रभु भन्छन् , जसले तपाईंलाई सिर्जना, एक याकूबले, र उहाँले तपाईंलाई जो गठन, हे इस्राएलका: "छैन भय, म तपाईंलाई उद्धार गर्नुभएको छ; म आफ्नो नाम तपाईं भनिन्छ छन्; तिमी मेरी हौं. जब तपाईं पानी पास, म तिमीसंग हुन्छु; र नदी मार्फत, तिनीहरूले तपाईंलाई ओभरफ्लो छैन. जब तपाईं आगो मार्फत हिंड्न, तपाईं जलाए गरिनेछ, न त लौ तपाईं scorch गर्नेछु। "" (यशैया 43:1-2)
साहसी हुन, क्याथरीन. तपाईं वरपरका ती तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ, तर परमेश्वरले तपाईंलाई नाम द्वारा कल ...! तपाईं उहाँको. उहाँले तपाईं संग छ, पनि परीक्षण आगो मार्फत. आफ्नो पक्ष द्वारा उहाँसँग, तपाईं एक्लै कहिल्यै हुनेछ. साहस लिन!
यो साइट मलाई एक चमत्कार हरेक दिन Jesus.net मद्दत गर्छ
टीना Olafusi • डिसेम्बर 5, 2018 मा 11:43 बजे • जवाफ
धेरै सर धन्यवाद, यो साँच्चै मलाई थाहा छ म कहाँ म मेरो उद्धारको लागि कार्य जारी छ जो प्रभु छु बनाउँछ.
सक्छ • जनवरी 26, 2019 मा 5:04 बजे • जवाफ
Ronald • सक्छ 3, 2019 मा 10:46 छु • जवाफ
Joseph Sabiiti • जुन 17, 2019 मा 9:25 छु • जवाफ
Tracy • जुन 23, 2019 मा 11:58 छु • जवाफ